Kooxda Bayern Munich oo ku guuleystay koobka UEFA Super Cup kaddib markii ay garaacday Sevilla… +SAWIRRO – Gool FM
(Yurub) 25 Sebt 2020. Kooxda Bayern Munich ayaa ku guuleystay koobka UEFA Super Cup kaddib markii ay ku garaacday naadiga reer Spain ee Sevilla 2-1, ciyaar aad u xiiso badan ay ku wada ciyaareen garoonka Puskas Arena ee wadanka Hungary
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay barbardhac 1-1 ay isku dhaafi waayeen labada kooxood Bayern Munich iyo Sevilla.
Daqiiqadii 13-aad kooxda Sevilla ayaa heshay rogoore waxaana gool u badelay laacibooda Lucas Ocampos, ciyaarta ayaana sidaas ku noqotay 0-1 ay ku hoggaaminesay kooxda reer Spain.
Laakiin daqiiqadii 34-aad kooxda Bayern Munich ayaa la tamid goolka barbardhaca, waxaana 1-1 ka dhigay dheesha Leon Goretzka, kaddib markii uu si qurux badan kaga caawiyay goolkan saaxiibkiis Robert Lewandowski.
90-ka daqiiqo ee ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay barbardhac 1-1 ah, waxaana ciyaarta lagu daray waqti dheeri oo 30 daqiiqo ah.
Daqiiqadii 104-aad Bayern Munich ayaa hoggaanka u qabatay dheesha, waxaana 2-1 ka dhigay Lucas Hernandez.
Ugu dambeyntiina ciyaarta ayaa ku dhamaatay 2-1 ay ku adkaatay kooxda Bayern Munich, naadiga reer Germany ayaana kaga guuleystay dhigooda reer Spain ee Sevilla, koobka UEFA Super Cup.